GỤỌ NKE Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Assamese Attié Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bambara Baoule Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Dairi) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Bengali Biak Bicol Bislama Bissau Guinean Creole Bolivian Sign Language Boulou British Sign Language Bulgarian Cakchiquel (Central) Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuukese Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Czech Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Finnish Sign Language Fon French Ga Galician Garifuna Georgian German Gokana Greek Guarani Gujarati Gun Guéré Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hmong (White) Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko Indonesian Irish Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Jula Kabuverdianu Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kekchi Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Konkani (Roman) Korean Korean Sign Language Kosraean Krio Kwangali Kwanyama Lamba Latvian Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lomwe Luganda Lunda Luo Macedonian Macua Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mazatec (Huautla) Mexican Sign Language Mixe Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Nigerian Pidgin Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Palauan Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Southern Greece) Rotuman Runyankore Russian Russian Sign Language Rutoro Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Tamil Tandroy Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tlapanec Tojolabal Tongan Toraja Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Uighur (Cyrillic) Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Valencian Venezuelan Sign Language Vezo Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zimbabwe Sign Language Zulu
Ịmata ụdị onye ị bụ na ihe i kweere ga-enyere gị aka ime ihe dị́ mma ma e nyewe gị nsogbu ka i mee ihe ọjọọ.
Chegodị banyere ihe atụ a: Otu nwa agbọghọ aha ya bụ Karen gara oriri na nkwari. Ọ nọfebeghị nkeji iri, ya anụ olu enyi ya nwaanyị bụ́ Jessica ka o si n’azụ jụọ ya, sị:
“Nke a i guzokwanụ ebe ahụ?”
Karen tụgharịrị hụ ka Jessica bu karama mmanya biya abụọ a ka kwụpere akwụpe. Jessica nyewere Karen otu karama mmanya ma sị ya, “Ị̀ ga-asị na i torubeghị ikporitụ ndụ?”
Karen chọrọ ịsị mba. Ma, cheta na Jessica bụ enyi ya. Karen achọghị ka o chewe na ọ bụ Mgbeeke. Ihe ọzọ bụ na Jessica so ná ndị e weere ka ezigbo mmadụ. Ebe ọ na-aṅụ mmanya, ọ pụtara na ọ bụghị ihe ọjọọ. Karen kwuru n’obi ya, sị: ‘Ọ bụ naanị mmanya. Ya na ịṅụ ọgwụ ọjọọ abụghị otu.’
Ọ bụrụ na ị bụ Karen, gịnị ka ị ga-eme?
Ka i nwee ike ime ihe dị́ mma ma ụdị ihe a mee gị, i kwesịrị ịmata ụdị onye ị bụ. Ịmata ụdị onye ị bụ pụtara na ị ga-ama ihe ndị i kpebiri ịna-eme na ihe ndị i kweere. Ọ ga-eme ka ị kata obi na-eme ihe i kpebiri ime kama ime ihe ndị ọzọ chọrọ ka i mee.—1 Ndị Kọrịnt 9:26, 27.
Gịnị ga-enyere gị aka ịna-akata obi? Ịza ajụjụ ndị anyị ga-atụle ugbu a ga-enyere gị aka.
1 OLEE IHE NDỊ M GA-EMELI?
Ịmata ihe ị ga-emeli ga-eme ka ị na-akata obi.
IHE Ị GA-AMỤTA NA BAỊBỤL: Pọl onyeozi dere, sị: “Ọ bụrụgodị na abụghị m ọkà n’ikwu okwu, n’ezie, adịghị m otú ahụ n’ihe ọmụma.” (2 Ndị Kọrịnt 11:6) Pọl ma Akwụkwọ Nsọ nke ọma. Ọ bụ ya mere na o kweghị ka ọnụ ndị mmadụ na-akọ ya mee ka ọ daa mbà. O kweghịkwa ka okwu ọjọọ ha na-agwa ya mee ka ọ ghara ịkata obi mee ihe dị́ mma.—2 Ndị Kọrịnt 10:10; 11:5.
CHEBARA ONWE GỊ ECHICHE: Dee otu ihe ị ma eme nke ọma.
Dee otu ezigbo àgwà ị na-akpa. (Dị ka ihe atụ, ị̀ dị obiọma? Ị̀ na-emesapụ aka? À na-atụkwasịli gị obi? Ị̀ na-abịa ihe n’oge?)
2 OLEE EBE NDỊ M NA-ANAGHỊ EME NKE ỌMA?
Ọ bụrụ na ị kpacharaghị anya, ebe ị na-anaghị eme nke ọma nwere ike ime ka ị ghara ịbụ ụdị onye ị chọrọ ịbụ.
IHE Ị GA-AMỤTA NA BAỊBỤL: Pọl ma ebe ndị ọ na-anaghị eme nke ọma. O dere, sị: “N’ezie, iwu Chineke na-eme m obi ụtọ, dị ka mmadụ m bụ n’ime si dị, ma ana m ahụ n’ahụ́ m iwu ọzọ nke na-alụso iwu nke uche m agha, na-adọrọkwa m n’agha gaa n’iwu nke mmehie.”—Ndị Rom 7:22, 23.
CHEBARA ONWE GỊ ECHICHE: Olee ebe ị na-anaghị eme nke ọma nke i kwesịrị ịgba mbọ ka i mezie?
3 OLEE IHE NDỊ M KPEBIRI IME?
Ị̀ ga-abanye n’ụgbọala gwa onye na-anya ya ka o buru gị gbawa gburugburu n’otu ebe ruo mgbe mmanụ ụgbọala ya gwụrụ? Onye mere ụdị ihe ahụ dara iberiibe. Ọ bụ ịla ego n’iyi.
Gịnị ka ihe a na-akụziri gị? I nwee ihe ndị i kpebiri ime, ọ ga-eme ka ị na-eme ihe ndị bara uru ma ghara ịna-eme ihe na-enweghị isi na ọdụ.
IHE Ị GA-AMỤTA NA BAỊBỤL: Pọl dere, sị: “Otú m si agba ọsọ abụghị ihe a na-ejighị n’aka.” (1 Ndị Kọrịnt 9:26) Pọl kpebiri ihe ndị ọ ga-eme, gbalịsiekwa ike mee ha kama ịfanye aka n’ụkwụ na-eche ka ihe ọma bịara ya.—Ndị Filipaị 3:12-14.
CHEBARA ONWE GỊ ECHICHE: N’okpuru ebe a, dee ihe atọ ị chọrọ ime n’afọ na-abịanụ.
4 OLEE IHE NDỊ M KWEERE?
Ọ bụrụ na ị mata ụdị onye ị bụ na ihe dị́ mma i kwesịrị ime, ị ga-adị ka osisi gbanyesiri mgbọrọgwụ ike, nke oké ifufe na-agaghị ebutuli
Ọ bụrụ na e nweghị ihe ndị i kweere, ị gaghị ama ihe ị ga-eme eme. Ị ga na-agbanwe ka ogwumagala ka obi dị́ ndị ọgbọ gị mma. I mee otú ahụ, ọ ga-egosi na ị gaghị abụ ụdị onye ị chọrọ ịbụ.
Ma, ọ bụrụ na ị na-eme ihe ndị i kweere, ọ ga-eme ka ị bụrụ ụdị onye ị chọrọ ịbụ n’agbanyeghị ihe ndị ọzọ na-eme.
IHE Ị GA-AMỤTA NA BAỊBỤL: O nwere ike ịbụ mgbe Daniel onye amụma ka na-eto eto ka o “kpebisiri ike n’obi ya” na ya ga-erubere iwu Chineke isi n’agbanyeghị na ọ bụghị ya na ndị ezinụlọ ya bi. (Daniel 1:8) Ihe a o mere gosiri na ọ chọrọ ịbụ ụdị mmadụ ọ chọrọ ịbụ. Daniel mere ihe ndị o kweere.
CHEBARA ONWE GỊ ECHICHE: Olee ihe ndị i kweere? Dị ka ihe atụ: Ì kweere na Chineke dị? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị mere i ji kwere? Olee ihe ndị mere ka obi sie gị ike na Chineke dị?
Ì kwetara na irubere iwu Chineke isi ga-abara gị uru? Ọ bụrụ otú ahụ, gịnị mere i ji kweta?
Mee elu mee ala, ọ bụ gị ga-ekpebi ụdị onye ị chọrọ ịbụ. Ị̀ ga-adị ka akwụkwọ kpọrọ nkụ nke ikuku na-ebugharị, ka ị̀ ga-adị ka osisi siri ike, nke oké ifufe na-agaghị emeli ihe ọ bụla? I kpebisie ike na ị ga-abụ ụdị onye ị chọrọ ịbụ, ị ga-adị ka osisi ahụ. Ọ ga-enyere gị aka ịza ajụjụ bụ́ Olee ụdị onye m bụ?
Legodị anya n’ihe atọ ahụ i dere ị chọrọ ime n’ajụjụ nke atọ. Dezie otu ihe ị ga-eme n’ọnwa a ka i nwee ike ime nke ọ bụla n’ihe atọ ahụ.